Trump oo si kulul ugu jawaabay madaxweynaha Faransiiska - BBC News Somali
Donald Trump: ''Hadalka Macron ka soo yeeray waa mid aflagaaddo ah''
North Atlantic Treaty Organisation ''NATO'' ayaa waxaa la aasaasay ka dib Dagaalkii Labaad ee Adduunka waxaana looga gol lahaa in looga hortago dhibaatadii sii baahaysay ee Midowga Soviet. 29-ka xubnood ayaa waxay ku heshiiyeen inay iska caawiyaan weerarkasato oo lagu soo qaado.
Maxaad ka taqaannaa xulafada gaashaanbuurta NATO?
Su'aalo ayaa laga keenay sii jiritaanka ururkaan maadaama ururkii Midowga sufiyet ee quwada lahaa uu burburay ku dhawaad 30 sano ka hor.
Muxuu Yahay ururka gaashaanbuurta ''NATO''?